We.com.mm - အဆင်းဘီးတပ်ပေးနေကြချိန်မှာ မိတ်ဆွေအတုအစစ်သိခွင့်ရလိမ့်မယ်လို့ဆိုလာတဲ့ ယုန်လေး
အခုလတ်တလောမှာ အဆိုတော်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ယုန်လေးရဲ့ “ငါတို့အားလုံးရဲ့မြေ” (စည်းလုံးသင့်ပြီ မြန်မာပြည်) သီချင်း MTV ဟာ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ အတော်လေးဂယက်ထနေပါတယ်။ အတော်လေးဝေဖန်ပြောဆိုနေကြသူတွေ ရှိသလို၊ ထောက်ခံသူတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
Image Credit: Yone Lay/ Facebook
အဲဒီသီချင်းကို ထူးအယ်လင်း၊ Cobra၊ မိုးမိုး၊ ဖြိုးမြတ်အောင်၊ အယ်လ်ဆိုင်းဇီ၊ ချမ်းချမ်းနဲ့ ရတနာမိုင်တို့ အပါအဝင် အဆိုတော်များစွာက ဝိုင်းဖွဲ့ သီဆိုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ MTV မှာလည်း မို့မို့မြင့်အောင်၊ သားညီ၊ ညီနန္ဒ၊ Jenny နဲ့ ထားထက်ထက်တို့အပါအဝင် သရုပ်ဆောင်များစွာက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါ။ ယုန်လေးကတော့ အဲဒီသီချင်းနဲ့ MTV ရဲ့ တေးရေး၊ တေးဆို၊ သရုပ်ဆောင်အပြင် ဒါရိုက်တာအဖြစ်လည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေကြားမှာ ဝေဖန်သူတွေများပြားခဲ့သလို ထောက်ခံသူတွေလည်း ရှိနေတဲ့ “ငါတို့အားလုံးရဲ့မြေ” MTV နဲ့ပတ်သက်လို့ သီချင်းပါဝင် သီဆိုခဲ့သူတွေ၊ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူတွေကြားမှာလည်း သဘောထားကွဲလွဲ မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ အဆိုတော်ယုန်လေးက သူ့ရဲ့တရားဝင် Facebook မှာ မိတ်ဆွေအတုအစစ်ကို သိခွင့်ရခဲ့ ကြောင်းနဲ့ ထူးအယ်လင်း၊ မို့မို့မြင့်အောင်၊ မြင့်မြတ်နဲ့ ခင်လှိုင်တို့အပါအဝင် သူ့ကို အားပေးခဲ့ကြတဲ့အနုပညာရှင် တွေကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ Facebook မှာ…
“ တော်တော်များများ အဆင်းဘီးတက်ပေးတဲ့ အချိန်မှာ မိတ်ဆွေ စစ် . အတု သိခွင့်ရလိမ့်ပါတယ် .
ကိုအယ်ကြီး နှင့် ပါဝင်သူညီ ညီမငယ် အစ်ကို . အစ်မ . အမေမွှေး ဝိုင်းအားပေးသလို .
မနေ့က ညနေ့က ညအထိ ကျွန်တော် အချစ်ဆုံးကောင် မြင့်မြတ် . ပြီးတော့ ကိုခင်လိူင် . ထူးခြား . Kညီ .
အတူရှိပေးကျတယ် . နှစ်သိမ့်ပေးကျတယ် .
သူရူတင်နောက်ကျရင် နောက်ကျနိုင်တယ် .ရုပ်ရှင်အစည်းရုံးကို ကျွန်တော့်အတွက်တောင်းပန်ဖို့ဆိုပြီး အခု မနက်အစောကြီးထပြီး ကျွန်တော်ထက်ဦးအောင် . မြင့်မြတ် ဦးဆောင်ပြီး OG Crew အကုန်ရောက်နေကျတယ် . ဒီလို မိသားစုတွေ ရှိတာကိုက အားအရမ်းရှိပါတယ် .
Messenger ကနေရာ . Ph နဲ့ ရော အားပေးတဲ့ အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်း
ကျေးဇူး မမေ့ပါဘူး. ဘယ်လို စိတ်ခံစားမူ့ မျိုးကြုံမလဲ ဆိုတာ
ခံစားဖူးတဲ့သူ . မိဘမရှိတဲ့ လူတိုင်း ဒီသိမ်ငယ်အားငယ်စိတ်ကိုသိမှာပါ .
မွေးထဲက မိဘနှစ်ပါး လုံးဆုံးတာပါ .
ဘယ်ရဲမူးကြီးသား မှ မဟုတ်ပါဘူး ခင်များ .
ဘာဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော် တစ်ယောက်ထဲပဲ ခံယူပါရစေ.
ပါဝင်ပေးသူများတစ်ယောက်နှင့်မှ မဆိုင်ပါ” လို့ သူ့ရဲ့စာမျက်နှာမှာ ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
အခုလက်ရှိအချိန်အထိတော့ အဆိုတော်ယုန်လေးနဲ့ သူကိုယ်တိုင်သီဆိုရေးသား၊ သရုပ်ဆောင်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ “ငါတို့အားလုံးရဲ့မြေ” MTV နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကောလာဟလများစွာထွက်ရှိနေသလို ဝေဖန်သူတွေနဲ့ ထောက်ခံသူ တွေကြားမှာ အငြင်းပွားနေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Source: Yone Lay/ Facebook
အသက် ( ၃၃ ) နှစ်မှာ သိန်းသုံးသောင်းခွဲတန်အိမ်ဝယ်နိုင်ဖို့ ဘယ်လိုကြိုးစားကြမလဲ
အမေရိကန်လုပ် F 35 ကိုတောင်ပစ်ချနိုင်တယ်လို့ဆိုလာတဲ့ တရုတ်ရဲ့ J 31 ကိုယ်ပျောက်တိုက်လေယာဉ်
Kpop Boy Group တွေထဲမှာ Real Maknae နဲ့ Fake Maknae တို့ကဘယ်သူတွေဖြစ်မယ်ထင်ကြလဲ ?